သဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » သဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who?	10
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 22, 2013 in Celebrity, Hoax | 10 comments
ပိတ်သက်ကျီးတို့ရေ.. (ဒေါ်မာမာအေး လေသံဖြင့်ဖတ်) ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အင်တာဗျူးမှာ စာရင်းစစ်ချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင်က သူ့နောက်ကျော ဓါးနဲ့ထိုးသွားသူဟာ လွှတ်တော်အုတ်ကထ သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပြီးနောက် ဂေဇက်ရွာသဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်ကို နောက်ကနေ ထိုးသွားသူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဖြေကြည့်ဂျပါအုံး…. ခရက်ဒစ်တူ http://burma.irrawaddy.org/archives/40167
အမေးဆိုပေမဲ့ ဂျွတ်တက်နေတဲ့ သဂျီးနှစ်လုံးပြူး အန္တာရာယ်ကြောက်ပြီး မဖြေရဲမှန်း သိနေလို့ ကိုယ်ပဲမေး ကိုယ်ပဲဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ် .. သွပ် သွပ်…
အဖြေမှန်က အများထင်နေသလို မိုက်ကယ်ဂျော်လကီအောင်ပု ဟုတ်ရှာပါဘူး၊ (ဒင်းလည်း အထိုးခံရသူပါပဲ) .. ဒါဆို ဘယ်သူဖြစ်မဲ.. နှုတ်တရာ စာတလုံး၊ စာလုံးတထောင် ပုံတပုံ စာချိုးရှိတဲ့အတိုင်း… ဟောသည့်ဓာ့ပုံလေး ကြည့်ဆုံးဖြတ်ကြပါ…. ကွယ်ရို့…. ရဲကား ဆွဲစား ပဲများ သဲယား
မင်းမင်း says: သဂျီးနောက်ကအထိုးခံရတာဆိုတော့ ဟီးးးးး
ကောင်းလားးးးးးးဟင် ! !
TNA says: သဂျီးကိုယ့်ဖာသာကိုယ်မှန်နှစ်ချပ်ကြည့်ပြီး ( ရှေ့တချပ်နောက်တချပ် ) ကိုယ့်နောက်ကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကိုယ့်ကျောကိုပြန်ထိုးပါကြောင်း။
မောင် ပေ says: အလို
ရွာထဲက ရာမည များလား ကွယ်တို့ 
awra-cho says: ဥရွှေမမ်းက အဲ့ထမင်းဆိုင် ဘယ်တော့မှ စားတော့ဘူးတဲ့ဂျ။ အကြွေးမရောင်းလို့ တဲ့၊
ဆူး says: အနောက်က ဆိုတော့ အလျှော်တော့ ရမှာပေါ့.. (ကားးးးးးးးးး ဆိုရင်ပြောပါတယ်)
အာမခံ ကုန်ပါပီ နဲ့ ညှိပြီးရောပေါ့..
Wow says: အော်.. မီးထိုးမှန်ထိုးခံရဒါဂိုး.. တော်သေးတာပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: နောက်ကနေတောင် အထိုးခံရတယ်ဆိုတော့
သဂျီး အမှုတစ်ခုခု လုပ်ထားတဲ့ပုံ
အာမခံမှ လောက်ပါ့မလားမသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
အရီးခင်လတ် says: WELL …. WELL …. WELL …
Here he is ….. ——————————————-
Ma Ma says: ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားတောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀န်ခံသွားပြီး။
အတွေးမမှားနဲ့ မောင်ကြောင်ကြီး ၀န်ခံလိုက်တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 104
kyaw hteik says: သဂျီးကို​နောက်​က ရဲကိုကို မှဒုတ်​မီးဖြင့်​ထိုးတာပါ။သဂျီး​ဟာ​နောက်​မီးလင်း​နေလို့ပါ။​အော်​တမျိုးမထင်​ပါနဲ့။
သဂျီးရဲ့ လင်​ဆာကားပါ။စိတ်​မဆိုး​နော်​ ခန္တီးပါရမီ ရှိတဲ့သူမို့စတာပါ။